စက်မှုဇုန်သတင်းများ - သတင်းများ - Dongguan Changsen Electronic Technology Co. , Ltd.
Dongguan Changsen အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် R&D နှင့် PCBA circuit board များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုပေါင်းစပ်သည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး PCBA circuit boards ၏ R & D၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအဓိကထားသည်။
ထုတ်ကုန်များကိုစမတ်အိမ်၊ ပေါင်းစပ်တိုက်နယ်၊ မိုဘိုင်းပါဝါထောက်ပံ့ရေး၊ Bluetooth၊ နားကြပ်၊ အသံ၊
Dongguan Changsen အီလက်ထရောနစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်သည် R&D နှင့် PCBA circuit board များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုပေါင်းစပ်သည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး PCBA circuit boards ၏ R & D၊ ဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုကိုအဓိကထားသည်။The products are used in all kinds of smart home, integrated circuit, mobile power supply, Bluetooth, headset, audio, PCBA circuit board and PCBA control board. There are 12 SMT mounters,6solder paste printers,6reflow soldering machines,3wave soldering machines and5assembly lines.
၎င်းသည်အမေဇုန်၊ အလီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များ၊ Jingdong နှင့် tmall များအတွက် PCBA ဆားကစ်ပြားများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းကိုအဓိကပံ့ပိုးပေးသည်။ ၎င်းကိုအမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ အိန္ဒိယ၊ သြစတြေးလျ၊ တောင်ကိုရီးယား၊ ဂျပန်၊ ဗြိတိန်နှင့်အခြားဥရောပနိုင်ငံများသို့ရောင်းချသည်။ ကုမ္ပဏီ၏နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုတန်ဖိုးသည်သန်း ၆၀ နီးပါးရှိသည်။
ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့် PCB စစ်ဆေးခြင်းကိုအရင်လုပ်ဖို့လိုသလဲ
PCB ဖောက်သည်များကယုံကြည်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့ထုတ်လုပ်သည်ကို PCB ဆားကစ်ပြားများအမြောက်အများထုတ်လုပ်သည့်အချိန်တွင်ကုန်ပစ္စည်းကြီးများထုတ်လုပ်ခြင်းကိုသက်သေပြခြင်းမပြုမီ PCB လိုအပ်သည်။ circuit board proofing သည်ထုတ်ကုန်၏အရည်အသွေးကိုကြိုတင်သိမှသာတုံ့ပြန်မှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တရားဝင်ထုတ်လုပ်မှုသည်မကောင်းပါ၊ အရည်အသွေးအာမခံချက်ရှိသော PCB proofing မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ဟုပြောပါ။
Power Adapter နဲ့ charger တို့ရဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲ
Power Adapter သည်ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကလက်ပ်တော့များ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းများ၊ ညွှန်ပြသူ၊ router များ၊ switches များနှင့် DC သို့မဟုတ် low voltage ac power supply အတွက်လိုအပ်သောလျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ laptop နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းအားသွင်းစက်များအတွက် power adapter၊ power adapter ဆိုတာ power supply တစ်ခုပဲ။ charger နဲ့ power adapter တို့အကြားမှာခြားနားချက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးပါ
လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ, လျင်မြန်စွာအားသွင်းခြင်းသည်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုလျင်မြန်စွာအားသွင်းနိုင်သည့်အားသွင်းကိရိယာ၊ ပိုမြန်လေလေ၊ အမှားတစ်ခုဖြစ်တယ်၊ သီအိုရီမှားယွင်းနေတယ်၊ ​​ပိုမြန်လေ၊ အမြန်အားသွင်းနည်းကိုဒီနည်းနဲ့သတ်မှတ်ထားတယ်၊ အမှန်မှာ၊ ကမ္ဘာပေါ်၌အဘယ်ဓာတ်အားသွင်းစက်သည်လျင်မြန်စွာအားသွင်းနေသနည်း။
ခရီးသွား charger ကိုအသုံးပြုရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း
Travel charger သည်များသောအားဖြင့်သိုလှောင်ရေးကိရိယာသို့စွမ်းအင်ဖြည့်ဆည်းပေးသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ charger သည် static converter တစ်ခုဖြစ်ပြီး power-electronic alternating current (AC) ကို အသုံးပြု၍ semiconductor devices များအားစဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အားနှင့်ကြိမ်နှုန်းဖြင့်ပုံမှန် current သို့ convert လုပ်သည်။
power adapter နဲ့ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သောလုံခြုံရေးပြseveralနာများစွာရှိသည်
power adapter ကကိုယ်ခန္ဓာကိုဓါတ်ရောင်ခြည်ထုတ်လွှတ်သလား။
Power adapter ထုတ်လုပ်သူများကဓါတ်ရောင်ခြည်ကိုလျှို့ဝှက်ညစ်ညမ်းမှုလို့ယူဆပေမယ့်ငါတို့ကျန်းမာရေးကိုအမြဲတမ်းအကျိုးသက်ရောက်တယ်။